तपाईंमा प्रेम परे-नपरेको मापन गर्ने यी ७ सुत्र ! – Sanchar Patrika
तपाईंमा प्रेम परे-नपरेको मापन गर्ने यी ७ सुत्र !
कोहिप्रति आर्कषित हुनु वा कसैलाई मन पराउनु मात्र प्रेम होइन । तर यो प्रेम भएको संकेत भने प्रेम एक स्वतन्त्र भाव हो । प्रेम जागृत रहदाँ उसको बारेमा मात्र सोच्नु, चिन्ता गर्नु वा त्यागका लागी समेत तयार रहनु पर्दछ । यदि कसैसँग प्रेममा पर्यौ भने त्यसको केहि संकेतहरु हुन्छ जसले आफु प्रेममा रहेको वा नरहेको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ ।
जे गर्न पनि तयार– जब कोहि मानिस प्रेममा पर्दछ उसको महत्व आफ्नो जीवनमा अपरी’हार्य झै लाग्न थाल्दछ । यस बेला मानिस उसलाई खुसि राख्न जे पनि गर्न तयार रहन्छ । उसलाई हसाउनु, उसलाई खुसी राख्नु वा अप्ठेरोमा साथ दिनु लगायतका काममा मानिसको सोच तल्लिन रहन्छ ।
नयाँ जीवन कल्पना गर्नु– यदि कोहि ब्यक्तिसँग प्रेम भयो भने यो अवस्थामा उसँगको जीवनको कल्पना गर्न थालिन्छ । तर यो आफु आर्कषित रहेको ब्यक्तिसँग पनि हुनसक्छ । तर प्रेम बस्यो भने लामो जीवनको कल्पना गर्न थालिन्छ । उसँग भेट्ने, जीवन काट्ने, घुम्ने कल्पना एकसाथ आउँछ ।
फरक ब्यवहार– अरु भन्दा अलग ब्यवहार र पहिले भन्दा फरक ब्यवहार गर्न थालेमा पनि मानिस प्रेममा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यो बेला मानिसको मस्तिष्कमा असामान्य अनुभव हुन्छ । उ हरहमेशा उ पार्टनरको बारेमा सोच्ने भएकाले प्रेम परेको मानिससँग झन् झन् आर्कषण बढ्दै जान्छ ।
वि’रोध सुन्न नसक्नु– प्रेममा परेको सबैभन्दा ठुलो र पहिलो संकेत हो जो सँग प्रेम छ, त्यसका बारेमा कसैले गरेको वि’रोध वा नकारा’त्मक कुरा सुन्न सकिदैन । उसको बारेमा कसैले नकारा’त्मक टिप्पणी गरे आफ्नो मन दुख्छ भने बुझ्नुस् तपाई उसँग प्रेममा हुनुहुन्छ ।
पी’डा महसुस हुदैन– यदि कोहि मानिस भर्खर प्रेममा पर्यो भने उसलाई हत्तपत कुनै पी’डाको महसुस हुदैन । कुनै चो’ट वा घा’उ लागेमा समेत उसले यसलाई वेवास्ता गर्ने क्षमता राख्दछ । मात्र प्रेम परेको मानिससँगको एक भेट, कुराकानी वा हेराहेर चो’ट बिर्साउन काफि रहन्छ ।
लुकिलुकि हेर्नु– यदि तपाई कोहि ब्यक्तिलाई बिना कुनै कारण पटक पटक लुकि-लुकि हेर्नु हुन्छ वा आखाँ ज्धुाएर हेर्न ग्राहो भइ रहेको छ भने यो अवस्थामा पनि तपाई प्रेममा पर्नु भयो । यो अवस्थाको हेराई कुनै फिल्मको दृष्य भन्दा कम हुन्न । यो अन्य हेराई भन्दा एकदमै भिन्न हुन्छ ।
कारण बिनै तना’व– यदि कोहि ब्यक्ति प्रेममा छ भने उ बिना कुनै कारण तना’वमा रहन्छ । यो बेला मनमा कहिले खुसी, कहिले उमंग हुन्छ । मनमा कुराहरु उकुस-मुकुस भएर बग्दछ । अनेकथरी भाव एकसाथ आउँछ । यस्तोमा मानिस अधैर्य हुन्छ । मनमा दवा’ब बढ्छ र मानिस तना’वमा झै रहन्छ ।
Prevअन्तत : दशगजामा भारतले नेपाली भूमि मिचेर बनाएको बाँध यथाशी’घ्र ह’टाउने भयो !
Nextकक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयतहमै सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गरिने
मसेलियामा श्रीमानलाई ब’न्ध’क बनाएर नेपालमा भएकी श्रीमतीसंग झण्डै १६ लाख रुपैया अ’सु ली
सुशान्त राजपुतले करण जोहरसँग अंगालो हालेको भिडियो भाइरल (भिडियोसहित)